दुबई धनी कसरी भयो ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय दुबई धनी कसरी भयो ?
अन्तरराष्ट्रिय 780 views
दुबई धनी कसरी भयो ?
काठमाडौं (अस) । संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको दुबई लक्जरी शपिङ, अत्याधुनिक आर्किटेक्चर र रात्रि जीवनका लागि प्रख्यात छ । यति मात्र नभई यो विश्वको धनी राष्ट्रमध्ये एकको रूपमा पनि चिनिएको छ । दुबई कसरी धनी भयो होला भन्ने कौतूहल सबैको मनमा हुन सक्छ । प्रारम्भमा दुबईको आर्थिक सम्पत्ति बढाउन तेल उत्पादनमा भएको वृद्धिले सघायो । तेल उत्पादनमा भएको वृद्घिले उसलाई एक प्रमुख तेल निर्यातक राष्ट्रका रूपमा चिनायो । निर्यात आम्दानीबाट दुबई एक समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल बन्यो । हाल दुबईलाई धनी बन्न सघाउनेमा पर्यटन, वित्त र रियल इष्टेट प्रमुख क्षेत्र हुन् । विश्वकै महँगो होटलमध्ये एक बुर्ज अल अरब दुबईमा रहनुले पनि यसलाई अझ प्रष्ट्याउँछ । दुबई सरकारले त्यहाँको तेल सञ्चिति धेरै समयसम्म टिक्न नसक्ने अनुमान गर्दै अर्थतन्त्र र वृद्धिको गतिलाई कायम राख्न अन्य सहयोगी परियोजनामा समेत केन्द्रित हुन थालेको हो ।
पक्कै पनि दुबईको अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन तेल उत्पादनबाट हुने नाफा प्रमुख तत्त्व हो । दुबईको सम्पत्तिमा योभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अतिरिक्त औद्योगिक स्रोत भने छैन । तर, पछिल्लो समय विश्वविख्यात संरचना र नवप्रवर्तनको विकासका कारण दुबई एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य बनेको छ ।
दुबई यूएईको राम्रो शहरमध्ये एक हो भने यो विश्वकै महँगो शहरमध्ये पनि एक हो । दुबईको कुल आम्दानीमा तेल तथा ग्यास उद्योगको भाग ७ प्रतिशत जति मात्र छ । आगामी २० वर्षमा दुबईको कच्चा तेल सञ्चिति सुक्ने विश्लेषण गरिएको छ । रियल इष्टेट र संरचना (निर्माण)सँग सम्बन्धित उद्योगहरू दुबईमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने उद्योगमध्ये पर्छन् । यी क्षेत्रले त्यहाँको कुल आम्दानीमा २२ दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगटेका छन् भने व्यापारले १६ प्रतिशत जति भाग ओगटेको छ । त्यस्तै, दुबईको आर्थिक सम्पत्तिमा वित्तीय सेवा उद्योगले ११ प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ ।
दुबई शहर महँगो हुनुबाहेक यो शपिङ गर्न चाहनेहरूका लागि उत्कृष्ट शपिङ राजधानी पनि हो । यसले पनि उसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाएको हो । दुबई धनी शहर हो र यहाँ धनाढ्यहरूको आकर्षण बढ्दो छ । सन् २०१३ को तथ्याङ्कअनुसार दुबईमा विश्वकै ठूलो शपिङ मल ‘दुबई मल’ रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१० मा दुबई सबैभन्दा बढी घुमिएका १० ओटा राष्ट्रको सूचीमा पनि समावेश भएको थियो । एजेन्सी
क्यानडामा मनोरञ्जन गतिविधिमा गाँजाको प्रयोग वैधानिक
७ असार २०७५, बिहीबार १५:४२
भारतमा स्याउलगायत अमेरिकी वस्तुको आयात महसुल बढ्यो
७ असार २०७५, बिहीबार १३:४३
रणनीतिक सहकार्य बढाउन किम र सि सहमत
७ असार २०७५, बिहीबार १३:३२
अमेरिकामा चिनियाँ लगानी ह्वात्तै घट्यो
७ असार २०७५, बिहीबार १३:०१